Jehovha Ndiani? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Kukurukurirana Tichishandisa Magwaro
Zita raMwari muchiHebheru rinomiririrwa nemabhii mana ekuti יהוה (YHWH) anozivikanwa seTetragrammaton, uye kana rashandurwa muchiShona rinonzi Jehovha. Iye zvino hapana anoziva kuti zita iri rainyatsodudzwa sei muchiHebheru chekare. Asi muChirungu zita rekuti “Jehovah” rava nenguva richishandiswa uye rakatanga kuoneka muBhaibheri rakashandurwa naWilliam Tyndale ra1530.*
ChiHebheru chekare chainyorwa pasina mavhawero, pachingoshandiswa makonzonendi chete. Muverengi wechiHebheru aiziva mavhawero ekuisa pashoko rimwe nerimwe. Asi Magwaro echiHebheru (“Testamende Yekare”) paakapera kunyorwa, vamwe vaJudha vakatanga kutenda mashura ekuti zvainge zvisina kunaka kutaura zita chairo raMwari. Pavaiverenga zvinonzwika rugwaro rwaiva nezita raMwari, vaitsiva zita racho nemashoko akadai seekuti “Ishe” kana kuti “Mwari.” Kwemazana emakore, kutenda mashura uku kwakaramba kuchipararira kusvikira pasisina munhu aiziva kuti zita racho raidudzwa sei.*
Vamwe vanofunga kuti zita raMwari raishevedzwa kuti “Yahwe,” vamwe vachitaurawo zvimwe. Mupumburu weGungwa Rakafa une chikamu chaRevhitiko muchiGiriki chinoshandura zita raMwari kuti Iao. Vanyori vechiGiriki vekare vanotaurawo kuti raishevedzwa kuti Iae, I·a·beʹ, uye I·a·ou·eʹ, asi hapana chinoratidza kuti aya ndiwo madudzirwo araiitwa muchiHebheru chekare.*
Chokwadi nezvenyaya iyi: Zita raMwari iro rakanyorwa ari mabhii mana muchiHebheru rinowanika ka7 000 muBhaibheri.* Mushanduro dzakawanda zita raMwari rakabviswa pasina zvikonzero zvine musoro, rikatsiviwa nezita rekuremekedza rakadai serekuti “Ishe.”
Tyndale paakashandura mabhuku mashanu ekutanga eBhaibheri, akanyora zita raMwari achiti “Iehouah.” Nekufamba kwenguva, mutauro weChirungu wakachinja, uye chiperengo chezita raMwari chakachinjwa zvichienderana nematauriro aiita vanhu. Semuenzaniso, muna 1612, Henry Ainsworth akarinyora achiti “Iehovah” mushanduro yake yese yebhuku raMapisarema. Paakazodzokorora shanduro iyoyo muna 1639, akashandisa zita rekuti “Jehovah.” Ndizvowo zvakaitwa nevashanduri veBhaibheri reAmerican Standard Version, rakabudiswa muna 1901. Vakashandisa zita rekuti “Jehovah” paiwanika zita raMwari mumagwaro echiHebheru.
The New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Volume 14, mapeji 883-​884, inoti: “Pane imwe nguva vaJudha vabva muutapwa, zita rekuti Yahwe rakatanga kuonekwa serinoyera zvekuti pakabva patanga kuva netsika yekubvisa zita iroro richitsiviwa nerekuti ADONAI kana kuti ELOHIM.”
Kuti uwane mamwe mashoko, ona mashoko ekuwedzera A4, “Zita raMwari muMagwaro echiHebheru,” ari muBhaibheri—Shanduro Yenyika Itsva.
Ona bhuku rinonzi Theological Lexicon of the Old Testament, Volume 2, mapeji 523-​524.